famaranana ny tetik’asa PROCOM
Manamafy ny fahafahan’ny fikambanana mpanelanelana hanome fomba fiasa tsara hatrany ho an’ny MPME. Izany no tanjona napetraky ny PROCOM na Programme d’Appui à l’Emploi et à l’Intégration Régionale sy namaritany ireo asa nandritra ny dimy (5) taona farany teo. Ny Alakamisy 04 Jolay noho izany no nanamarihana ny famaranana ity tetik’asa ity.
Hetsika iray izay nanaovana jery todika ireo vokatry ny tetik’asa, ohatra amin’izany ny fanamafisana hatrany ny fikambanana mpanelanelana miaraka amina vahaolana nampiharin’ny Foibem-pitondrana Ankapobe misahana ny fadintseranana sy ny Foibem-pitondrana Ankapobe misahana ny fananan-ketra. Nisy araka izany ny sampan-draharaha izay napetraka manokana eny anivon’ny Antenimiera ny varotra sy ny indostria entina hanohanana ireo asa tontonsain’ny PROCOM ho tombontsoan’ny mpikambana. Ny MICA, izay nosolon’ny Sekretera Jeneraliny tena, M. Fabrice Raharijaona, dia naneho fisaorana sy fankasitrahana ny delegasiona Eoropeanina ny amin’ny fampiharana ity tetik’asa ity ho an’ireo sehatra tsy miankina. Ny Minisitera hoy izy dia vonona hatrany ny amin’ny fanamorana ny fitohizan’ny asa efa natomboka.
Miarahaba ihany koa ireo mpikambana eo amin’ny sehatra tsy miankina ny amin’ny fahavononan’izy ireo ny hiara-miasa ao anatin’ny tetik’asa ary manasa azy ireo haharitra hatrany amin’ny asa rehetra ho fanatsarana izany sehatra izany eny anivon’ny faritra ny MICA.
Fanaraha-maso tany Antsirabe.